सहिमाको आवाजमा रेखाको जवानीको चर्चा ! (हेर्नुहोस् भिडियो) - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
सहिमाको आवाजमा रेखाको जवानीको चर्चा ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
माघ ५, काठमाडौं । सफल तथा हिट गितहरु दिएर नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित बनेकी गायिका सहिमा श्रेष्ठले नायिका रेखा थापाको जवानीको चर्चा गरेकी छिन् । चलचित्र राज्जा रानीको ‘पिंकु मिस’ बोलको गीत यतिबेला चर्चामा छ । सहिमाको बुलन्द आवाज रहेको उक्त गीतमा रेखा थापाको जवानीको चर्चा गरिएको छ । भिडियोमा उनले आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गरेकी छिन् ।